Ina Dhuubo oo u Dusay Saraakiil Tigray ah, Waxna Laysyidhi – Rasaasa News
Ina Dhuubo oo u Dusay Saraakiil Tigray ah, Waxna Laysyidhi
Feb 2, 2010 ethiopia, inadhuubo, Ogaden, ONLF, somalida
Waxaan dhawaanahaba aanu aad isha ugu haynay dhaqdhaqaaqa Ina Dhuubo, oo ku saabsan iskuday ah heshiis laga helo saraakiil Tigray ah. waxaana uu ilaa iyo hada sameeyey iskudaygii labaad ee uu ku heli lahaa cid ka war gurta is Indho la,aaneed.
Ina Dhuubo oo ah ninka ugu xishoodka taran kooxda Jwxo-shiil, ayuu Jwxo-shiil u xilsaaray in uu soo helo wadiiqo loo maro Itobiya. Kooxda Jwxo-shiil ayaa samaysay iskudayo dhawr ah inta aan ka warhayno, oo ku saabsan sidii Itobiya looga heli lahaa xidhiidh wadahadal oo hoose. Iskudayadaas ayaa waxay ka dhaceen Dubai, Doha, Copenhagen iyo kan ugu dambeeyey oo ka dhacay Oslo.
Kooxda Jwxo-shiil, oo iyadu noqotay koox ku sifowday halgan dumis, taariikh xumo weyna ka kasbatay dadweynaha Somalida Oganeeya, ayaa waxay jeclaan lahayd in hal mar kulan heshiis ay la gaadho saraakiisha Ethiopia Tigray [scapegoat], walina way la,a yihiin wax ceebta ka maydha oo ay kaga baxsadaan halganka ay dumiyeen.
Heshiiska ay kooxda Jwxo-shiil ka doonayso Tigray, ayaa ah in ay xukuumada Tigraygu maqashiisu dadweynaha Somalida Ogadeeniya Onlf, ayaa la heshiisay dawlada Itobiya, arintaas oo ay diidan tahay xukuumada Itobiya, waayo waxay ogtahay in kooxda Jwxo-shiil ayna waxba fara ugu jirin.
Iskudayaas ah, in heshiis laga helo Itobiya, waxaa ka mid ah dadka loo idmaday Dubai Musafe oo madaxa shirkada Kaah, isku raasna ay yihiin jwxo-shiil, ayaa kolkii ugu horesyay u Jwxo-shiil u xilsaaray bishii April 2009, isaga warqada geeyey qusuliyada Itobiya, arintaas oo ay diiday qusuliyada Itobiya.
Mar labaadkii waxaaa isku dayey in Itobiya wadiifo laga helo Maxamed Ismaciil [Qaaxo], waxaana uu ahaa mid uu telefoon kula xidhiidhay gudoomiyaha Jaaliyada Itobiya ee Qadar Doha, arintaas oo ay sarakiisha safaarada Itobiya markii loo gudbiyey diideen, August 2009.
Mar saddexaadkii waxaa uu iskuday kale ka dhacay Denmark, waxaana isku dayey Ina Dhuubo, xiligii uu Copenhagen ka socday kulankii Isbedelka Cimilada Caalamka, isku daygaas oo ay sarakiil Itobiyan ahi sheegeen in ay isa soo raaca labada garab, oo uusan ku jirin Jwxo-shiil.
Ugu dambayn todobaadkan dhaxdiisii, ayaa waxaa ka dhacay magaalada Oslo, isku day keeni kara is faham waxaana u kala dabqaadayey Safaarad iyo Ina Dhuubo nin hore Kaalinka uga shaqayn jiray haatanse degan Sweden oo reer Dhagaxbuur ah.
Waxaana lagu wada sheekaystay baa la yidhi telephone, gabadha qusulka ka ah Safaarada Sweden iyo ninka Kalinka 5aad oo dhinac ah iyo Ina Dhuubo oo dhinac ah, nasiib daro ma hayno cidii la joogtay cadaani iyo in uu kaligii ahaa xiliga telefoonka lagu wada sheekaysanayey.
Ina Dhuubo, ayaa ku soo marmarsooday wax uu ugu yeedhay shir Jaaliyadeed oo ay isugu yimaadeen 5 haween ah, shan caruur ah oo ay dhaleen iyo kuwii qabay, oo qaraabonimo isugu yimid.
Warkaas beenta ah ee kulan Jaaliyadeed, balse raad gadasho ahaa waxaa soo daabacay boggaga kooxda Jwxo-shiil, naarta ka xiga.
Colaada iyo Abaaraha ka Jira Dhulka Somalida Ogadeeniya Yaa Masuul ka ah?